Calaamadaha Wadnaha ee Shiinaha ayaa Tijaabiyey Soo-saareyaal iyo Alaab-qeybiyeyaal - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Tijaabada Caafimaadka > Tijaabooyinka Calaamadaha Wadnaha
Calaamadaha Wadnaha Tijaabada calaamadaha wadnaha ee calaamadaha wadnaha iyadoo loo eegayo dhacdooyinka iyo horumarinta cudurrada wadnaha iyo natiijada habka kala-soocidda, sifooyinka bayoolojiga ee ku dhawaad ​​100 nooc oo calaamado wadnaha ah, habka baaritaanka shaybaarka, muhiimadda bukaan-socodka, arrimaha saameynta iyo tixraaca caadiga ah kala duwan sameeyey sharaxaad ka mid ah nidaamka, waa qiimaha hagitaan wax ku ool ah ee buugaagta tixraaca, Waa u qalantaa tixraaca shaqaalaha kiliinikada iyo shaybaarka.
Tijaabooyinka Calaamadaha Wadnaha waa hannaan firfircoon oo u dhexeeya arrimaha cudur-sidaha iyo habka dib-u-hagaajinta difaaca jirka. Calaamadaha wadnuhu waxay kaliya qayb ahaan ka tarjumayaan isbeddellada wadnaha mana beddeli karaan shaybaarada shaybaarka ee sida caadiga ah loo isticmaalo (tusaale, echocardiography, jajabka ka bixista wadnaha ee bidix, iwm.). Fasiraadda natiijooyinka ogaanshaha biomarker-ka wadnaha waa in lagu daraa isbeddellada pathophysiological ee bukaannada, si ay u noqoto hab muhiim ah oo lagu ilaaliyo isbeddellada jidhka.
Tijaabooyinka Calaamadaha Wadnaha, sidoo kale, hal-biomarker-ka wadnaha ma laha dareen sare oo gaar ah isla waqti isku mid ah, iyo heerka isku dhaca ogaanshaha waa mid hooseeya. Daraasaduhu waxay muujiyeen in isku-darka calaamado badan oo wadnaha ah ay hagaajin karaan waxtarka ogaanshaha. Isku dhafka macquulka ah ee calaamadaha wadnaha ayaa soo jiidanaya dareenka.
Tijaabooyinka Calaamadaha Wadnaha waxay muujinayaan in codsiga isku-dhafka ah ee calaamadaha wadnaha ay ku habboon yihiin hagaajinta dareenka iyo gaar ahaaneed ee codsiga kiliinikada ee calaamadaha wadnaha, taas oo gacan ka geysaneysa ogaanshaha hore ee bukaannada qaba cudurrada wadnaha, ka qaybqaata baaritaanka hore iyo daaweynta bukaanka, wax ku biirinta la socodka cudurka, ka qayb qaadashada qiyaasta saadaasha bukaanka. Calaamadeyaal badan oo wadnaha ah ayaa ah kuwo aan caadi ahayn oo keliya marka muruqa wadnaha uu dhaawacmo, laakiin sidoo kale xaaladaha kale ee wadnaha sida wadnaha oo shaqayn.
99.9% Saxnaanta Sare ee Mamma Perfect Hcg Tijaabada Uurka Degdeg ah
99.9% saxnaan sare mamma kaamil hcg uur tijaabo degdeg ah: Baaritaanada uurka waa mid ka mid ah su'aalaha ugu muhiimsan ee haweeneydu ay ka qabto uurka. Sidee ku ogaan kartaa haddii aad ilmo dhashay? Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo qaado baaritaanka uurka. Laakiin mabaadi'da ugu muhiimsan waa isku mid. Markay uur yeelato, ukunta bacrimisay waxay si joogto ah u qaybisaa unugyada waxayna soo daysaa hormoon la yiraahdo hCG (hormoonka chorionic). Marka hCG uu galo dhiigga hooyada, waxa ay ka soo saartaa kaadideeda kelyaheeda. Marka fiirsashada gaadho dherer gaar ah, ilaa inta iyada oo loo marayo ogaanshaha reagent baaritaanka uurka, ogaan kartaa in uu jiro uur guul leh.
99.9% Saxda ah ee HCG Baaritaanka Xarigga Uurka
99.9% saxnaanta HCG ee tijaabada xariijimaha uurka: Baaritaanada uurka waa mid ka mid ah su'aalaha ugu muhiimsan ee haweeneydu ka qabto uurka. Sidee ku ogaan kartaa haddii aad ilmo dhashay? Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo qaado baaritaanka uurka. Laakiin mabaadi'da ugu muhiimsan waa isku mid. Markay uur yeelato, ukunta bacrimisay waxay si joogto ah u qaybisaa unugyada waxayna soo daysaa hormoon la yiraahdo hCG (hormoonka chorionic). Marka hCG uu galo dhiigga hooyada, waxa ay ka soo saartaa kaadideeda kelyaheeda. Marka fiirsashada gaadho dherer gaar ah, ilaa inta iyada oo loo marayo ogaanshaha reagent baaritaanka uurka, ogaan kartaa in uu jiro uur guul leh.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Tijaabooyinka Calaamadaha Wadnaha oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Tijaabooyinka Calaamadaha Wadnaha soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Tijaabooyinka Calaamadaha Wadnaha la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.